Caalamka Online » Heshiisyada Turkiga ee Suudaan- oo loolan cusub ku noqday dhinacyada kasoo horjeeda ee Ankara?
Heshiisyada Turkiga ee Suudaan- oo loolan cusub ku noqday dhinacyada kasoo horjeeda ee Ankara?
December 27, 2017 - Written by caalamka - Edited bycaalamka
Booqashada Madaxwaynaha Turkiga ee Rajab Tayip Ordogan ee Suudaan ayaa Natiijooyinka ka dhashay waxaa ka mid ah : Saxiixa heshiisyo ku saabsan iskaashi milatari, dhaqaalo iyo dib-u-dhis lagu samaynayo magaalada dekkada leh Swakin, sidoo kalana taariikhiga ah.
Madaxweyne Erdogan ayaa Isniintii (25-kii December, 2017) kaga dhawaaqay Khartoum in Sudan Dowladda suudaan ku wareejisay maamulka jasiiradda Badda Cas ku taala Swakin mudo uusan cayimin, Jaziirada ayaa turkigu dib u dhis ku samayn doonaa iyaga oo goobaha taariiqiga ahna sidoo dii hore u dhisi doona.
Erdogan iyo dhigiisa Suudaan Cumar al-Bashir ayaa booqday Jaziirada Swakin, ee hada ay mashaaricda dib loogu dhisayo ku howlantahay Hay’adda (TIKA), waxaana y ka socda mashaariic lagu soo celinayo Aasaazrtiii qadika ahayd ee ilaa Xiligii dowladda Cismaaniyiinta soo jirtay.
Booqasahda Erdogan ee Sudaan ayaa lagu timaamay mid Taariikhi ah waayo wuxuu noqonayaan Madaxwaynahii u horeyay ee Turki ah ee Booqda Suudaan tan iyo waaguu uu madax bananidiisa qaatay Sudaan.
Khattar Abu Diab, oo ah barfasor cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Paris iyo khabiir ku xeel dheer Arrimaha Bariga Dhexe ayaa sheegay in Dekada Swakin ay tahay dakadda labaad ee ugu wayn suudaan marka laga soot ago bortasuudaan oo 60 kiiloomitir waqooyiga kaga beegan.
Dhankakale magaalada Sawakin waxa ay Turkiga u keedahay muhiimad gaar ah, oo waxa ay ahayd goob ay maamulaan Bokhortooyadii Cismaaniyiinya mudadii u dhaxaysay 1821 ilaa 1885, iyaga oo Badda Cas iyo nawaaxigeeda ka ilaalin jiray.
Dowladda Suudaan ayaa bilawaday furfurnaasho siyaasadeed ee dhanka dibada ah iyada oo xirriro kala duwan la samaysanaysa wadamada caalamka sidoo kalana ka qayb qaadatay howlgalka uu sucuudiga horboodayo ee yaman ka socda.
Sidoo kale Maraykanka ayaa 12-kii Oktoobar waxaa uu qayb ahaan ka xayiraada dhanka ganacsi ee saarnayd ee mudo laba sano ah saamaysay dhaqaalaha Suudaan.
Wasiirka arrimaha dibada Sudan ayaa beeniyay in Dalkoodu uu doonayo in uu galo isbahaysiyo goboleed. “Suudaan waligeed qeyb kama noqonin loolanada siyaasadeed ee wadamada qaar ka dhaxeeya, waxaanan u furanahay dhamaan wadamada adduunka oo aan kala qayb qaadan karnaa hormarinta danaha aan wadaagno, Turkey waa waddan aan walaalo nahay waxaa naga dhaxeeya taariikh dheer,” ayuu Ghandour ka sheegay shir jaraa’id oo wadajir ay u qabteen isaga iyo dhigiisa Turkiga.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga Mouloud Tashad oglo ayaa isna shirka jaraa’id oo ay wada jir u qabteen dhigiisa Sudaan ka sheegay in “Turkiga wuxuu sii wadi doonaa taageerada ay siineyso Suudaan si uu u ilaaliyo ammaanka Badda Cas,”. “Waxaan daneyneynaa ammaanka Suudaan, Afrika iyo ammaanka Badda Cas,oo ah marin muhiim ah ay ka gudbaan badeecooyinka caalmaka” ayuu yiri Tashadooglu.
Dhiniciisa, wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Ibraahim Ghandour ayaa shirka jaraa’id ku sheegay in Suudaan iyo Turkigu ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo ay ku jiraan mid madeni ah kuwa milatari, samaynta xarumo lagu sameeyo doomaha kala duwan iyo maraakiibta dagaalka iyo iyo kuwa rayidka ahba. Waxa uu intaa raaciyay in “Wasaaradda Difaaca Suudaan ay iskaashi milatari ee dhinacyo badan la saxiixatay Turkiga, sioo kalana ay wadamada saaxiibada la aha Suudaan xiliwaliba la leeyahiin hadan ay sii xoojinayaan.